Tantric Biography - Profil de Rock Band Tantric
Tantric Biography sy Profile
Tantric dia nandray fitaomam-panahy avy amin'i Alice tao amin'ny Chains and Creed noho ny marika henjana vato mafy. Nipoitra avy amin'ny lavenon'ny vondron'olona nahomby, Days of the New, mpikambana ao amin'ny tantrik voalohany dia nahita mpihaino ara-barotra lehibe tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, saingy raha niasa ny folo taona, dia niray tsikombakomba ny fitokonana anatiny sy ny mediocre ny hanohanana ny fitokisana azy ireo. Tsy nahafa-po, Tantric niverina tamin'ny taona 2009 niaraka tamin'ny rakikira vaovao, Mind Control.
Ny tantaran'i Tantric:
Ny telo amin'ireo mpikambana ao amin'ny Tantric - Todd Whitener, guitarist Matt Taul sy bassist Jesse Vest - dia anisan'ny tarika tamin'ny faran'ny herinandro 'Days of the New, izay nitaingin-tsoavaly marevaka toy ny Soundgarden sy Alice ao Chains ho an'ny laza malaza. Saingy ny tsy fifanarahan'ny mpanohana sy ny mpihira am-pitiavana Travis Meeks dia nitarika ny ambiny tao amin'ny vondrona, na dia notifirina na nitsahatra tamin'ny tenany manokana. Nanapa-kevitra ny hanangana vondrona vaovao ireo mpiangaly mozika telo ireo, ka ny mpandefa mpihira vaovao no nandraisana an'i Hugo Ferreira. Ny tarika dia nanao sonia ny mari-pamantarana Maverick an'i Madonna ary nanomana ny lahateniny.
Fanandramana nahomby teo am-pelatanana:
Ny voalohany tamin'ny fizotry ny tantrikan'i Tantric dia nidina tamin'ny Febroary 2001. Noho ny tanjaka nataon'i Tantric , dia mazava fa farafaharatsiny ny nandefasana an'i Ferreira noho ny fahaizany mamaly ny ahiahy mahatsiravina nataon'i Layne Staley, ilay mpanohana an'i Alice ao Chains. Tsy vondron'olona liana amin'ny famotehana tontolon'ny sehatra vaovao izany - fa, amin'ny hira toy ny hoe "Breakdown" tokana, i Tantric dia naniry ny handeha amin'ny fiarandalamby fitaterana an -dalambe izay tsara ho an'ny vondrona toy ny Creed ary, tatỳ aoriana, Nickelback .
Nandroso ny Tantric , na dia azo lazaina aza fa nisy ny tsikera mivaivay rehefa tsy nilefitra izy ireo.
Telo taona taty aoriana dia nody i Tantric niaraka tamin'ny After We Go , sombin-kazo hafa amin'ny vatomamy hena. Mbola nanova an'i Alice tao amin'ny "Chesty mystical / demonic" chains amin'ny singam-be toy ny "Hey Now", i Tantric dia tsy nahazo tombony firy ara-barotra niaraka tamin'ny After We Go , ka nanahy ny hoavin'ny tarika.
Fiovan'ny famolavolana sy fisainana marika:
Talohan'ny namoahana ny rakitsary nanaraka ny band, Tantric dia niaina andiana fiovàna. Ireo mpikambana ao amin'ny tarika, ankoatra an'i Ferreira, dia nandao ny tarika - maneso, ny mpanohana izay nokaramain'i Whitener, Taul ary Vest dia mpikambana tokana sisa tavela tamin'ny fandaharana tantrican'i Tantric. Ferreira dia nanangona mpihira vaovao ary nandao ny andianà hira efa nosoratany niaraka tamin'ny mpiara-migadra tany am-piandohana. Tetsy an-danin'izany, nisaraka tamin'ny Maverick i Tantric, izay nitarika ny fomba haneken'izy ireo ny Silent Majority mba hamotsorana ny The End Begins 2008, izay tsy nahavita nanodina ny harena ara-barotra tao amin'ny vondrona.
Tantric dia niverina niaraka tamin'ny rakikira vaovao, Mind Control , tamin'ny 4 Aogositra 2009, izay novokarin'ny mpilalao bassist teo aloha sy ny mpanatrika teo aloha Brett Hestla teo aloha. Taorian'ny fiovan'ny olona marobe niaraka tamin'ny tarika tatsimo izay niparitaka nanerana an'i Etazonia, dia nividy ny rakitra mozika tamin'ny alalan'ny mailaka ireo mpikambana mba hanangana ny hirany. Ny tarika taty aoriana dia niara-nanambatra niaraka tamin'ireo hirany 30 tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ka nisafidy ny nanoratra hira 12 ho an'ny iray amin'ireo sarimihetsika mavesatra indrindra hatramin'izao.
Ilay mpihira tarihin'i Hugo Ferreira dia tsy nahitana afa-tsy mpikambana iray tao amin'ny tarika nandritra ny fampisehoana ny tononkalo fahadimy Tanty faha-37, izay noforonin'i Ferreira.
Ny rakikira dia nampiseho feon-kira avy amin'ny Shooter Jennings sy ny mpihira an'i Hinder izay mpihira avy any Austin Winkler. Ny album album dia nasongadina mpiangaly mozika maromaro ary mba hampiroboroboana ny rakikira Ferreira dia nametraka band vaovao iray izay nilalao tao amin'ny rakikira.
'Arsivan'ny Blue Room':
Ho an'i Tantic ny fahirano tantara an-tsarin'i Tantic, Ferreira indray pirinty Blue Room 2014 izay noforonina ho toy ny rakikira noforonina miaraka amin'ny fitaovana tsy voavela teo aloha tamin'ny asa rehetra nataony. Ny lohatenin'ilay rakikira dia avy amin'ny anaran'ny trano fonenan'ny tarika, "The Blue Room." Ilay rakikira dia misy ihany koa ny dikan-drakitra vao haingana nosoratan'ny "Breakdown" sy ny "Fisaonana" ary ny famerimberenana vaovao momba ny "Mind Control" sy ny "Fall to the Ground".
Hugo Ferreira - sangany
Tommy Gibbons - gitara
Hira Essence Tantric:
Hugo Ferreira, momba ny fomba nahatonga azy ho anisan'ny tetikasa tantrican'i Tantric.
"Ny orinasa iray ihany no nitantana anay tamin'ny fotoana iray tao anaty tarika antsoina hoe Merge ary tao amin'ny Days of the New. Izahay dia nifankahalala ary nifampizara kely fotsiny. Vonona ny hiova aho, ary nafahan'izy ireo ny andro fialantsasatra vaovao ary nitady gig vaovao koa izy ireo. Nidina sy nihira niaraka tamin'izy ireo aho, ary tena voajanahary izany. Tsara daholo ny rehetra, ka toy ny hoe, 'Hey, angamba tokony hiantso an'ity zavatra ity isika.' Nantsoinay hoe C-14 izany, izay anarana niandohan'ilay tarika. Taorian'izay, dia nanapa-kevitra ny hahazo anarana tsara kokoa izahay. "
Hugo Ferreira, momba ny fomba niatrehany ny olana momba ny lisitry ny olona sy ny fanamafisana ny momba ny ' After We Go' .
"Taorian'io fahatairana tany am-boalohany io dia nesoriko avokoa ny karazana heriny rehetra ka lasa mozika fotsiny. Niditra tao amin'ny lakalin'ny tranoko aho izay misy amina trano fandraisam-bahiny, ary nanomboka nanoratra aho. Ny zavatra mampihomehy mikasika ny fandehanana amin'ny ady dia ny mampanahy anao ny ady. "
Hugo Ferreira, manazava ny antony nanapa-kevitra ny hitazona ny anarana Tantric taorian'ny fialàn'ny tarika sisa.
"Tena nifamatotra tamin'ny maha-izy ahy manokana aho, ary izaho tsy te-hanomboka amin'ny scratch. Azoko ny zavatra tato anatin'ny tanako. Ny fomba fijeriko azy dia ny maha-ampahany ahy amin'ny hoe iza no mametraka ity tarika ity amin'izao fotoana izao, noho izany aho dia tena manan-jo hampiasa ny anarana.
Tsy nijanona teo amin'ny tarika aho, ny olon-kafa rehetra. Izaho dia mbola mino an'io. "
Tantric nandrakotra an'i Fleetwood Mac ny "The Chain" tao aorian'ny fivoahantsika .
Hugo Ferreira dia nihaona tamin'i Nuno Bettencourt, taloha teo amin'ny sokajy voalohany tamin'ny '90 Extreme.
(Natontan'i Bob Schallau)
Chevelle Biography sy Profile
Rap-Rock sy ny Hip-Hop ny niaviany
Biôgrafia sy ny Profile of Pilot Stone Temple
Ny voalohany dia manompo amin'ny tennis vehivavy
Fomba hisafidianana ny tsara indrindra amin'ny sehatry ny Business School
20 Lahateny misy teny tsy noresahintsika tany an-tsekoly *
George Mason University GPA, SAT sy ACT Data
Inona ny Alahady Alahady mandritra ny Alakamisy?
10 Fakan-tsary momba ny krôma
Ahoana ny fiasan'ny Legacy Admissions
Mankalaza ny SAT National tamin'ny taona 2015
Fantaro ireo famitahana ho an'ny "Rêver" (ho an'ny nofy) amin'ny teny Frantsay
Ny fanafihana an'i Fort Sumter tamin'ny Aprily 1861 dia nanomboka ny ady an-trano Amerikana
Sarintanin'ny Takelaka Tectonic sy ny sisintany
Ahoana ny fomba fampiasana ny fihenan'ny fihenan'ny frantsay
Biography of Cicero - Romana Intellectual & Politician
Fahagagana an'i Jesoa: Fanasitranana vehivavy iray niparitaka tamin'ny vahoaka
Manoratra Emails sy Taratasy tsy ara-potoana
Inona avy ireo sariaka?
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny kabary sy lahateny
I John Travolta dia miezaka mitafy haingon-damba
Shaft Tapers - Ny lakandranon'i Taft sy ny anao
John Napier Biography - Matematika malaza